Abenzi basechina High Speed ​​Double Roller Crusher nabaphakeli | I-Bricmaker
I-roller ingxubevange ngobulukhuni ngaphezu kwe-HRC50 nickel ephezulu, i-molybdenum, izinto zethusi ne-vanadium, isisindo esinzima ngokwengeziwe, ne-engeli encane yokuphakela. Ingakhama futhi ixove izinto zokusetshenziswa, icwenge izinto zokusetshenziswa ngokukhipha okuphezulu, ithuthukiswe ipulasitiki, inciphise inani lemfucuza, futhi iqinisekise ikhwalithi yezitini ezingenalutho.
Ifanele izinto zokusetshenziswa ezingaphansi kobulukhuni obuphakathi nendawo (ubulukhuni bePlatins 4-5), njengodaka lwentaba nokwakhiwa kwenhlabathi nokwakha.
Umsebenzi Izinto zokusetshenziswa ziqeda ukuchoboza
Isimiso Esisebenzayo 2-Roller Crushing
00 1400 × 1200
I-Double Roller Gap
I-4340 × 2380 × 2350
a) Ngaphambi kokwethula okokusebenza, opharetha kufanele ahlole izinto zokubopha ezahlukahlukene ngokucophelela, ezingenakuba nezingxenye ezikhululekile noma ezingekho. Izingxenye ezijikelezayo kufanele zihlole ngokuqinisekile ukuthi akukho mkhuba wokuvimba.
b) Umshini ungafaka ukusebenza okungalayishi ngemuva kokuhlola ukuthi yiziphi izingxenye zokusebenza ezijwayelekile. Kufanele kube emahoreni ama-2 ajwayelekile ngemuva kokusebenza kokulayisha. Ngaso sonke isikhathi ukuqala kabusha akufanele kuqale ukulayisha kuqala, ngemuva kokufinyelela isivinini esilinganisiwe bese ufaka ukusebenza kokulayisha.
c) Ngenxa yokungalingani kokulingana kwento leyo, ukudlidliza kwawo wonke umshini osebenzayo kungaletha izinto zokuqinisa izinto, ngakho-ke qiniseka ukuyihlola njalo.
d) Noma i-roller isethi yobulukhuni iphakeme, kufanele futhi sivimbele phezu kwamadwala aqinile, ingxube yokuqukethwe yensimbi ekuvulekeni kokuphakelayo, ngenxa yalokho kulimala kusethi yama-roller.
e) Lapho ingcindezi yama-roller evundlile ingaphezulu kwe-132884.8N, izikhonkwane zokuphepha ezikhungweni zomshuwalense ezinhlangothini zombili ziyanqunywa ukuvikela okokusebenza. Inqobo nje ukuthi esikhundleni sebhokisi eliphephile lingaqhubeka nokusebenza. Uma ingcindezi yohlangothi olulodwa lwe-roller yeqa u-66442.4N, iphini yokuphepha nayo izonqunywa.
f) I-calcium eyinkimbinkimbi yokugcoba i-calcium (ZFG-1) ifakwe kumjovo wokugoqa ngesikhathi semishini ihlanganiswe okokugcina, futhi i-grease idinga ukushintshwa noma ukwengezwa ngemuva kokusebenza izinsuku eziyi-10-20.
g) Izinhlangothi ezimbili zensimbi eguquguqukayo eguquguqukayo kufanele ihlale ihlanzekile ngaso sonke isikhathi, bese ifaka uwoyela womshini ongu-20 # njalo (1time / shift), ukuze iroli eguquguqukayo ikwazi ukuhamba izinkinobho zokuqondisa ngamandla okuchoboza namandla entwasahlobo, bese ukwandisa amandla okuchoboza.
h) Ukulungiswa kwezindandatho zokugoqa izindandatho: qhaqha ukuvikela imaski ezinhlangothini zombili zomzimba, faka idivayisi yokugaya efakwe ku-chassis ngomkhono we-shaft, isikulufa sokubopha, i-roller ejikelezayo (<10 r / min kufanelekile, ingasebenzisa isinciphisi esisheshayo).
i) Ukuhambisa isondo lesandla, lungisa indawo ehambisanayo, ujike ulungise isethi yama-roller.
Langaphambilini I-Hammer Crusher eguquguqukayo
Olandelayo: Kuvunguza Stone Ukususwa Roller